COVID-19: Miaraka amin'ity isika rehetra, saingy tsy manao toa an'izao tontolo izao
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao momba ny fahasalamana » COVID-19: Miaraka amin'ity isika rehetra, saingy tsy manao toa an'izao tontolo izao
Vaovaom-panjakana • Vaovao momba ny fahasalamana • Vaovao • Safety • Tourism • Etazonia Vaovao Vaovao • Vaovao isan-karazany
Tale jeneralin'ny WHO momba ny predicction COVID-19
Ny isan'ireo aretina COVID-19 voarakitra dia nihoatra ny 200 tapitrisa tamin'ny herinandro lasa teo, 6 volana monja taorian'ny nandalovana 100 tapitrisa. Amin'ity taha ity, izao tontolo izao dia afaka mandalo 300 tapitrisa amin'ny fiandohan'ny taona ho avy hoy ny Tale jeneralin'ny World Health Organization (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus.
Na eo aza ny fisian'ny vaksiny maro, ny isan'ny tranga vaovao sy ny maty dia mitombo manerantany.
Ireo tarehimarika dia misy fiatraikany manokana amin'ny karazana Delta noho ny toetrany azo ampitaina indrindra.
Na dia miresaka momba ny fahazoana tsimatimanota aza ny olona rehetra, nilaza ny talen'ny Sampan-draharahan'ny Immunisation WHO fa tsy misy "isa majika".
Nanampy izy fa ny faminaniana miaraka amin'ny fanamarihana ambany pejy fa ireo isa ireo dia saika azo antoka fa ambanin-javatra ary na inona na inona hanodinkodina an'ity virus ity dia hanao hetsika mahery vaika.
Hoy i Tedros: “Miaraka daholo isika rehetra, saingy tsy manao toa an'izao tontolo izao.”
Nitaraina izy fa na dia misy aza ny vaksiny maro, ny isan'ny tranga vaovao sy ny maty dia mitombo hatrany, indrindra ny fiatraikan'ny delta variant sy ny toetrany tena azo ampitaina.
Na dia miresaka momba ny fahazoana tsimatimanota aza ny tsirairay, ny talen'ny World Health Organization Nilaza ny sampan-draharaha misimisy fa tsy misy “majika majika”. Nanazava izy hoe: “Tena misy ifandraisany amin'ny fomba azo ampitana virus io. Ny zava-nitranga tamin'ny coronavirus… dia ny hoe rehefa mipoitra ny karazany ary azo ampitaina bebe kokoa, dia midika izany fa olona betsaka kokoa no mila vaksiny mba hahatratrarana tsimatimanota amin'ny andiany. Ity dia sehatry ny tsy fahazoana antoka ara-tsiansa. ”
Ohatra, ny kitrotro dia areti-mifindra tokoa ka manodidina ny 95% ny mponina dia tsy maintsy voaro na vaksiny mba tsy hiparitahany. Na dia ekentsika tanteraka aza ny fanaovana vaksiny ho an'ny kitrotro ka hatramin'ny ohatra, any Amerika, dia vita vaksiny ny zazakely amin'ny faha-12 taonany, ny fanavaozana ny COVID-19 dia mahatonga ny olona ho diso fanantenana na matahotra na izy roa. Betsaka loatra ireo izay tsy matoky fa tsy ampiasaina ho guinea pig mba hitsapana ny fahombiazan'ity “vaksinim-baovao ity”. Mandritra izany fotoana izany, ny olona maty eran'izao tontolo izao noho ny COVID-19 nahatratra 4,333,094 androany.
Ho an'ireo izay tratran'ny virus, ny fanantenana dia miorina amin'ny filazan'ny tompon'andraikitra ao amin'ny OMS fa betsaka ny fikarohana natao momba ny fitsaboana ny COVID-19. Fitsarana amin'ny firenena marobe izay mbola tsy nisy toa azy hoe Solidarity Plus no hijery ny fahombiazan'ny fanafody vaovao 3 any amin'ny firenena 52.